नेकपा सचिवालय बैठकः नयाँ मन्त्रीको टुंगो लाग्दै ! – Makalukhabar.com
नेकपा सचिवालय बैठकः नयाँ मन्त्रीको टुंगो लाग्दै !
'बालुवाटरमा साढे १२ बजेपछि सुरु हुने बैठकले मन्त्री हेरफेरको टुंगो लगाउने तयारी छ'
मकालु खबर	 २०७७ आश्विन ६ गते प्रकाशित 716
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक आज बस्दैछ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मध्यान्ह साढे १२ बजे बस्ने बैठकमा यसअघि पेस गरिएको प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ ।
बैठकमा यी प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै मन्त्री हेरफेरको टुंगो लगाउने तयारी छ । साथै पार्टीको संगठन विभाग, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिको पदपूर्ति, संवैधानिक नियुक्ति लगायतको विषयमा पनि छलफल हुने बुझिएको छ ।
एकिकृत राप्रपाको चुनाव चिन्ह हलो, कमल थापाले भने- ‘एकता जोगाउन सम्झौता गरें’
एकैपटक ४८८ इन्सपेक्टरको सरुवा, को कहाँ पुगे ? [सूचीसहित]